Mpamatsy sy mpanamboatra vatomamy - Mpanamboatra Bonnet China
Volavola vaovao Silk bonnet mavokely matevina
Ity fonosana volo vita amin'ny landy ity dia misy kofehy lava ao an-damosina miaraka amina tarika elastika sy fisainana fisaka eo aloha. Izy io dia vita amin'ny landy mulberry tsara indrindra 100% kilasy 6A 16mm, 19 mm, 22mm lanjany, mba hiarovana ny volonao amin'ny fahavoazana isan-kariva. Mitazona ny hamandoana voajanahary sy mamiratra, tsy dia manapaka rehefa matory. Manakana ny fahaverezan'ny volo ary manampy amin'ny fitomboana indray. Mitazona ny taovolonao tazomina vaovao ary mifoha tsy misy lohany / loha fandriana. ● Fomban-doko: Saron-tory mahazatra vita amin'ny landy vita amin'ny landy miaraka amina kofehy. E ...
Loko volafotsy vita amin'ny satroka landy
Volon'ondry landy loko mavokely
Bonnet alina amin'ny landy
Satroka torimaso landy ho an'ny volo olioly
Loko volamena vita amin'ny satroka landy
Satroka vita amin'ny landy Mulberry
Satroka torimaso polyester
Fampidirana fohifohy ny safidin'ny lamba polyester Bonnet Custom 100% polyester malaza habe ONE size dia mifanaraka amin'ny haben'ny loha: 50-100cm ； Craft endrika pirinty Digital na Logo voaravaka loko matevina, sosona tokana na roa sosona. Ny tarika bandy elastika misy tadiny dia mahatonga ny torimaso amin'ny alina tsy miova mandritra ny alina, mety amin'ny fomba anyhair, toy ny olioly, wig, straight, dreadlock ary sns. Colony misy mihoatra ny 2 ...
New bonnet Poly satin bonnet
Voninkazo bonnet satana polyester